Itekhnoloji | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
I-smartphone yohlahlo lwabiwo-mali iNokia 2.3 ifumene ukuzimela ukuya kwiintsuku ze-2
ezaposwa ngomhla 09.12.2019 09.12.2019
I-HMD Global ibhengeze ifowuni entsha yohlahlo-lwabiwo mali e-Egypt. Ngelixa kulindelwe kakhulu ukumiliselwa kweNokia 8.2, owona msitho wawenzelwe ukusungula iNokia 2.3. Le yinqanaba lokungena ...
IHuawei ngumboneleli ophambili we5G eRashiya
ezaposwa ngomhla 03.11.2019 03.11.2019
Imibuzo ejikeleze imfazwe yorhwebo yase China-US, apho iHuawei isembindini wempikiswano, ngamanye amaxesha inemixholo enomdla. I-Russia ithathe isigqibo sokuba amaTshayina aya kuba ngumboneleli ophambili wesiseko se5G. Rhashiya ...
Umatshini wokuhlamba owakhelwe kwi-countertop (ifoto)
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 17.09.2019
Kwiimeko zokuhlala ezincinci, ukuphazamiseka kuvela ngokunxulumene nokubekwa kwezixhobo zasekhaya. Kungenxa yoko izinto ezahlukeneyo ezingasetyenziswanga ekuphekeni zibandakanyiwe kuyilo lweeseti zasekhitshini. Ngokukodwa, ukuhlamba ...
"INokia C7": iimpawu zefowuni kunye nokuphononongwa
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 26.12.2019
"INokia C7 00", iimpawu zayo eziza kuhlaziywa kweli nqaku, zibizwa nje ngokuba "yiNokia C7" ngabasebenzisi. Le smartphone inendawo ekhethekileyo kumgca wezixhobo zeNokia. Ngapha koko, le yi-smartphone yesibini ...
Ifowuni "iNokia Lumiya 530": uphononongo, iinkcukacha
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 23.12.2019
Iifowuni zelayini yeNokia Lumia ziphakathi kwezona zidumileyo eRashiya. Abalandeli bezixhobo ze-elektroniki eziphathwayo ezivela kwiRussian Federation zihlonipha isiFinnish (kutsha nje - de jure waseMelika - kwinto eyaziwayo ...
I-MTS 982 ye-smartphone: uphononongo, uphononongo lomnini kunye neenkcazo zeefowuni
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 19.08.2019
Ngo-2014, ngokwesiko esele lithandwa ngabasebenzisi abaninzi, kunokwenzeka ukuba uthenge i-touchscreen ye-smartphone kumqhubi ngexabiso elinomtsalane. Ngeli xesha sinikwe imodeli ye-MTS 982. Iindleko zayo ...
"INokia X6": iinkcukacha, imiyalelo, iifoto
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 09.10.2019
Ukuhlala kwihlabathi lanamhlanje, kunzima ukuba nomfanekiso-ngqondweni wakho ngaphandle kwento eqhelekileyo njengeselula. Siyayidinga emsebenzini, ekufundeni, kunxibelelwano nabantu esibathandayo, kunye nokuzonwabisa ...
Intlawulo nge "Enkosi" iibhonasi ezivela kwi-MTS Sberbank. Uhlawula njani ngeebhonasi "Enkosi" ezivela kwi-MTS Sberbank?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 15.09.2019
Okwangoku, umbutho we-MTS usebenzisana neeofisi ezininzi, enye yazo yiSberbank. Kufuneka kuqatshelwe ukuba banenani elikhulu leenkonzo eziqhelekileyo, umzekelo, "Intlawulo ye-MTS ngeebhonasi" Enkosi ukusuka ...
I-Fly 4416 ifowuni-inkcazo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 10.10.2019
Iimodeli zefly mobile ezixhaphakileyo aziqhelekanga kunezinye izixhobo ezikhuphisanayo, kodwa zinezibonelelo ezininzi. Olona phawu lubalaseleyo kolu luhlu lweemodeli sisixhobo sendlebe esithuleyo. Nangona kunjalo, oku kufanelekile kuphela ...
Ikhamera yangaphambili - yeyantoni kwaye uyisebenzisa njani?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 11.10.2019
Namhlanje, abavelisi bee-smartphone bazama ukugqwesa omnye komnye ngokongeza iimodyuli ezintsha kunye neempawu zekhompyuter kwizixhobo zabo. Ngaphezulu kweminyaka emi-5, into enjalo njengekhamera yangaphambili yaziwa kwimarike ehambahambayo. Phambi ...
Oomatshini bokuhlamba abathe cwaka: yenza ukhetho
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 28.09.2019
Kudala zahamba iintsuku apho inkqubo yokuhlamba yanika oomama izindlu ingxaki enkulu. Akusekho sidingo sokuntywila amashiti amakhulu kunye nezembozo zetyuwa ebusuku, okanye ukukrazula ulusu lwezandla zakho kude kube ligazi ...
Yintoni ibhedi ye-diode?
Enye yezinto ezisisiseko kwi-elektroniki yanamhlanje yidiode. Isetyenziswa kwimijikelezo apho kufuneka ukulungiswa kwe-AC, kwaye isetyenziswa phantse kuzo zonke izixhobo zombane zasekhaya. Ungayifumana kwiTV, ...
Ungayikhetha njani ithebhulethi ngekhamera elungileyo kunye nebhetri (uphononongo)
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 12.10.2019
Uluhlu lwezixhobo zefowuni zale mihla zibanzi kangangokuba ukwenza ukhetho ngokwenyani akukho lula kangako. Kukho iimodeli ezininzi ezahlukileyo kwixabiso, umenzi, iinkcukacha. Ndenza ...
Umnxeba olungileyo: uphononongo. uqhagamshelo lweselfowuni
Akusiyo imfihlo ukuba iifowuni zakwamanye amazwe zenziwa ngendlela yokuhambahamba. Kuthetha ukuba umbhalisi, ukunxibelelana nenombolo ayifunayo, usebenzisa iinkonzo hayi zomsebenzisi wakhe, kodwa zenkampani yelinye ilizwe (ngokulamla ...
I-Microwave Convection: yintoni? Ingqungquthela kunye ne-Grill Microwave
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 14.10.2019
Ukuba uthatha isigqibo sokutshintsha ioyile yakho encinci ye-microwave entsha, emva koko iintlobo ngeentlobo zemodeli ziyakumangalisa namhlanje. I-oveni ye-Microwave ene-convection okwangoku ixhaphake kakhulu (kuphela kukujonga malunga nabo ...
I-Smartphone Microsoft Lumia 435: uphononongo, iinkcazo kunye nokuphononongwa
I-Lumia 435 yimodeli yohlahlo-lwabiwo mali enomdla. Sisisixhobo sokuqala kulungelelwaniso lwama-400 ukujolisa kubaphulaphuli ekujoliswe kubo ngaphandle kweyona modeli yophawu. Ukuba ufuna i-smartphone yomntwana, i-backup okanye ...
Yintoni i-diode ye-GP kwaye iyintoni injongo yayo?
Rhoqo, abasebenzisi bezixhobo zekhompyuter bayalibala ukuba, ngokungafaniyo nezixhobo ze-acoustic, iitv
I-RS trigger. Umgaqo wokusebenza, imizobo esebenzayo, itafile yokuguqula
I-trigger sisixhobo esilula, esiyi-automaton yedijithali. Inamazwe amabini ozinzo. Elinye lala mazwe linikwe ixabiso "1", elinye lathi "0". Isimo sokubangela kunye nexabiso lokubini ...
Ngaba kufuneka ndithenge ithebhulethi yeXiaomi? Uphengululo kunye nokuphononongwa kweyona mizekelo mihle
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 14.12.2019
Imakethi yeekhompyuter zethebhulethi, njengee-smartphones, iyatshintsha ngamandla. Ukuba izolo i-Apple kunye ne-Samsung kungabizwa ngokuba ziinkokeli ezingenakuphikiswa zolu shishino, namhlanje abanye abavelisi bayazifumana. Omnye wazo…
Uyigcwalisa njani kwakhona ikhatyhidi leCanon
Iiprinta ze-Inkjet zezona zisombululo zifikelelekayo zokukhupha ulwazi lwedijithali kwiphepha. Kukho iinkampani ezimbalwa kuphela ezibandakanyeka kwimveliso yobuninzi bezo printa. Ezi zi-Epson, Canon kunye ne-HP. Abanye ...
Imibuzo ye-77 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,912.